भलिबलको भलो कि कुभलो ?
खेलकुद शुक्रबार, साउन १७, २०७६
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदकको दावेदार रहँदै आएको महिला भलिबल पछिल्लो समय खेलाडी छनोटका कारण विवादले जेलिएको छ ।
पदक विजेता भलिबल राष्ट्रिय टोली ।
खेलाडी छनोटको विषय कहिले सामान्य रूपमा टुंगिए पनि कहिले विवादित बनिदिन्छ । हालै महिला भलिबलमा भएको खेलाडी छनोट विवादमा परेको छ । नेपालमा आउँदो मंसीरमा आयोजना हुने १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) को लागि भएको प्रारम्भिक छनोटमा टोलीका मुख्य ६ खेलाडी एकसाथ हटाइँदा प्रश्नहरू उठे । खेलाडीहरू स्वयम् बोल्न थालेपछि तथा नेपाल भलिबल संघमा लिखित उजुरी नै दिएपछि विवादले गम्भीर रुप लिएको छ ।
कप्तान र उपकप्तान सहित सेटमा खेल्दै आएका अनुभवी खेलाडीहरू प्रारम्भिक चरणका २५ भित्रैै नपर्दा अनेक प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविकै हो । प्रारम्भिक टोलीमा नपरेका खेलाडीहरू कप्तान विनिता बुढाथोकी, उपकप्तान मञ्जु गुरुङ सहित कोपिला उप्रेती, नेविका चौधरी, मनिषा चौधरी र निता शाह हुन् ।
विनिताको नेतृत्वमा यी सबै खेलाडीले भारतको गुवाहाटीमा सम्पन्न सागको १२औं संस्करणमा काँस्य पदक जितेका थिए । लिफ्टर विनिता सन् २०११ मा सम्पन्न १०औं सागदेखि नियमित कप्तानी गरिरहेकी थिइन् । त्यस यताको तीन वटै संस्करणमा नेपालले काँस्य जितेको थियो ।
फ्याँकिएका खेलाडीहरूलाई आफू छनोटमा नपर्नुको पीडा त छँदैछ, टोलीमा अनुभवहीन खेलाडीहरू राखिएको देख्दा उनीहरूको मन थप कुँढिएको छ। मञ्जु भन्छिन्, “टोलीमा परेका खेलाडी हेर्दा झन् दुःख बल्झिन्छ । उनीहरू अयोग्य भन्न खोजेको होइन, हामी प्रारम्भिक टोलीमा समेत पर्न नसक्ने कसरी भयौं भन्ने मात्रै प्रश्न हो ।”
ओपन स्पाइकर मञ्जु गुरुङ विगत १० वर्षदेखि राष्ट्रिय टोलीकी उपकप्तान छिन्, जो सागको दुई संस्करणको काँस्य विजेता टोलीकी प्रमुख सदस्य हुन् । राष्ट्रिय टोलीका सबैभन्दा पुराना खेलाडीमा निता शाह र कोपिला उप्रेती पर्छन् । नेपाल प्रहरीका यी खेलाडीहरूले महिला भलिबलमा झन्डै दुई दशक खर्चेका छन् ।
यी खेलाडीहरूलाई प्रारम्भिक टोलीमा नसमेटिनुमा उनीहरूको बढ्दो उमेरलाई प्रमुख आधार मानिएको छ । तर उपकप्तान मञ्जुको तर्क छ, “आधार उमेर हुन्छ कि प्रदर्शन ? यदि खेल्न सक्छ भने उमेर अयोग्यताको मापक हुन सक्दैन । उमेरलाई नै आधार बनाइएको भए पनि हामीलाई जानकारी दिनुपथ्र्यो । हामी जिल्ला छनोटमा नै भाग लिंदैनथ्यौं ।”
नेविका र मनिषा चौधरी भने युवा खेलाडी हुन् । यी दुवै २० वर्षका मात्र छन् । अरु खेलाडीलाई उमेरलाई कारण मान्दै नसमेटिए पनि आफूहरू समेत अयोग्य ठहरिंदा उनीहरू अचम्भित छन् । मनिषा भन्छिन्, “भर्खरै २० वर्ष लागेकाले देशको लागि म अझै धेरै खेल्न सक्छु । तर कसरी अयोग्य भएँ ?”
फ्याँकिएका खेलाडीहरूलाई आफू छनोटमा नपर्नुको पीडा त छँदैछ, टोलीमा अनुभवहीन खेलाडीहरू राखिएको देख्दा उनीहरूको मन थप कुँढिएको छ । मञ्जु भन्छिन्, “टोलीमा परेका खेलाडी हेर्दा झन् दुःख बल्झिन्छ । उनीहरू अयोग्य भन्न खोजेको होइन, हामी प्रारम्भिक टोलीमा समेत पर्न नसक्ने कसरी भयौं भन्ने मात्रै प्रश्न हो ।”
बन्द प्रशिक्षणमा छनोट भएका खेलाडीहरु ।
१३औं सागमा समेटिएका हरेक खेलका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले सम्बन्धित खेल संघलाई खेलाडी छान्ने अधिकार दिएको छ । जसमा एकल र समूहगत खेलमा छनोटको आधार बेग्लाबेग्लै हुन्छ । एकल खेलमा छनोट खेलमा जित्ने खेलाडीहरूलाई छानिन्छ भने समूहगत खेलतर्फ सम्बन्धित संघले छनोट गर्छ ।
भलिबल संघले बनाएको पाँच सदस्यीय छनोट समितिले खेलाडीको छनोट गरेको हो । संघका उपाध्यक्ष यम गुरुङ संयोजक रहेको समितिका सदस्यहरूमा मुख्य प्रशिक्षक सलिना श्रेष्ठ, सुदेश रिमाल, जगदीश भट्ट र कौशिला खत्री छन् । समितिले उत्कृष्ट खेलाडी छनोट गर्न केही आधार तय गरेको सदस्यहरू बताउँछन् । ती आधारमा खेलाडीहरूले भने जस्तो उमेरलाई मात्र मापदण्ड बनाइएको छैन ।
छनोट समितिका एक सदस्य जगदीश भट्टको भनाइमा पुराना र चर्चित यी खेलाडीहरूलाई प्रारम्भिक चरणबाटै हटाइनुको मुख्य कारण उनीहरूको ‘नाम र प्रतिष्ठा’ जोगाइदिन हो । उनी भन्छन्, “राम्रा युवा खेलाडीहरूको आगमन भइसकेकाले वर्तमान भलिबल निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनिसकेको छ । यस्तोमा बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएर अन्तिम छनोटमा फ्याँकिंदा उनीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्न सक्ने हुँदा प्रारम्भिक टोलीमा नै बोलाएनौं ।”
उपकप्तान, मञ्जु गुरुङ ।
छनोट समितिका पदाधिकारीहरूका अनुसार अन्य आधारले पनि उनीहरू राष्ट्रिय टोलीभित्र नअटाएका हुन् । जस्तो, कप्तान विनिताको पछिल्लो प्रदर्शन स्तरीय नभएको उनीहरू औंल्याउँछन् । समितिका सदस्य भट्टको भनाइमा १२औं सागको एउटा खेलमा उनले ८ वटा फल खेलेकी थिइन् । “उपकप्तान मञ्जु आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा एउटा मात्र खेल खेलेर विदेश लागिन् । नियम विपरीत खेलाडी छान्ने प्रश्नै भएन । नेविकालाई आफ्नो ढाडको समस्याबारे राम्रो ज्ञान छ”, उनी भन्छन् ।
निता र कोपिलालाई आफ्नो ढल्कँदो उमेर र खस्कँदो प्रदर्शनका कारण टोलीमा नराखिएको हो । सागमा खेलाडीको सहभागिताका लागि नेपालगञ्जमा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने नियम राखेपले बनाएको थियो ।
छनोट समितिको निर्णयबारे सदस्य भट्ट भन्छन्, “कुनै पनि प्रशिक्षकले देशको लागि राम्रो भन्दा राम्रो खेलाडीले नै खेलोस् भन्ने चाहन्छ । युवा खेलाडीलाई अहिले मौका दिंदा भविष्यमा उनीहरू अझ तिखारिन्छन् ।”
कप्तान, विनिता बुढाथोकी ।
छनोट समितिले नयाँ खेलाडीहरू राखिनुमा दिएको तर्कसँग धेरै प्रशिक्षकहरूको असहमति छ । साग आउन चार महीना मात्र बाँकी रहँदा उमेर होइन प्रदर्शनलाई आधार बनाएर योग्यलाई टोलीमा राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “यस्तो बेला नयाँको भविष्य खोज्ने होइन, राम्रालाई मौका दिने हो”, उनीहरू भन्छन् ।
कतिपय प्रशिक्षकहरू भने दशकसम्म राष्ट्रिय टोलीमा योगदान दिएका खेलाडीहरूको बहिर्गमन अपमानजनक भएको टिप्पणी गर्छन् । यसबाट अन्य खेलाडीहरूको ऊर्जामा असर पर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय भलिबल टोलीका पूर्व कप्तान भरत शाह भन्छन्, “महिला भलिबललाई दशकभन्दा बढी योगदान दिएका खेलाडीहरू कम्तीमा सम्मानजनक बहिर्गमनका हकदार हुन् । उनीहरूलाई इज्जत दिंदा युवा खेलाडीहरूमा पनि राम्रो सन्देश जानेथियो ।”
अन्य प्रावधान हेरफेर नभए अहिले २५ भित्र अटाएका खेलाडीहरू १८ हुँदै अन्तिम चरणमा १२ जना छानिनेछन् । विवादमाझ अब छनोट समिति र महिला टोली हेर्ने प्रशिक्षकहरूलाई अब्बल टोली निर्माण गरेर आलोचनाको जवाफ दिने चुनौती थपिएको छ ।